Ikhaya » izithuba » Iindaba zokuHamba » Imikhosi yase-UK ilungiselela umsebenzi weSierra Leone we-Ebola
Imikhosi yase-UK ilungiselela umsebenzi weSierra Leone we-Ebola
ILONDON, eNgilani - Umphathiswa Wezomkhosi uMark Francois uncome abasebenzi bezomkhosi abenza uqeqesho kwezonyango ukunceda ukulwa i-Ebola kwintshona ye-Afrika.
Ngaphezulu kwamalungu e-100 eSibhedlele saseBritane i-22 Field Hospital balungiselela ukubonelela ngeyunithi yeebhedi ezili-12 zonyango kubasebenzi bezempilo eSierra Leone.
Namhlanje, umnumzana Francois ubonile uqeqesho lobufundisi kwiziko lezomkhosi elise Strensall, eliyilelwe ukuphuhlisa nokuvavanya iinkqubo zeklinikhi nezombutho ezifunekayo.
Abasebenzi baqhube iinxalenye zomthambo kwizixhobo zabo zokukhusela kwi-hangar eguqulwe yaba sisibhedlele sentsimi yokuhlekisa, benyanga abantu abonzakeleyo ukuphindaphinda imeko abalindele ukuyifumana xa bethumela.
Umnumzana Francois uthe:
Intsholongwane ye-Ebola imele isoyikiso sempilo yoluntu kwaye asizukuma sime. I-UK ibiphambili ekuphenduleni ubhubhane kwaye oogqirha bethu baya kuqhubeka nomsebenzi omkhulu osele wenziwe ziinjineli zomkhosi, abacwangcisi, i-DFID kunye nabameli be-FCO kunye nee-NGO.
Lo msebenzi uza kubandakanya iseti eyahlukileyo yemiceli mngeni, kodwa ndiyakholelwa ukuba oogqirha bethu bezomkhosi, esizingca kakhulu ngabo, banako ukubonelela ngenkxaso kuMbutho wezeMpilo weHlabathi ekuncedeni ukuqhambuka kulawulo.
Abasebenzi bezomkhosi baya kuthumela eSierra Leone kwiveki ezayo apho baya kujoyina iinjineli zomkhosi kunye nabacwangcisi abakwilizwe phantse inyanga, bejongile ukwakhiwa kwezixhobo zonyango.
Umphathi-mkhosi 2 wezonyango, Brigadier Kevin Beaton, uthe:
Sidale ukugculelwa okusingqongileyo esiya kuthi sisebenze kuyo xa sele sithunyelwe, senza ukuba abasebenzi bethu baziqhelanise neenkqubo abaza kuzenza kunye nezixhobo zabo zokukhusela, besebenza kwiimeko ezinzima.
Siyakholelwa ukuba le yimishini efanele ukuyenza, kwaye umngcipheko kufanelekile ukuthatha ukukhusela abantu bethu njengoko siqubisana ne-Ebola.
Indawo eneebhedi ezili-12 ngumtya nje omnye wokuzibophelela kwe-UK ekulweni i-Ebola. Sebenzisa ubuchwephesha baseBritane kunye neekhontraktha zokwakha zasekhaya, i-UK ithembise ukuseka iziseko zophuhliso zeebhedi ezingama-700.
Iqela labasebenzi bezomkhosi abangaphezu kwe-40, kubandakanya abagibeli bezinto, abacwangcisi kunye neenjineli, okwangoku basemhlabeni eSierra Leone ukongamela ukwakhiwa kweziko lase-UK kufutshane neFreetown kunye nokuphuhlisa iziza zoncedo olutsha.
I-UK izokwakha ubuncinci i-4 yonyango lwe-Ebola kufutshane namaziko asezidolophini kubandakanya iPort Loko, iFreetown, iMakeni neBo.